Humnaanis Tahe Olola Dharaatiin Dhugaa ABO fi Kan Qabsoo Bilisummaa Oromoo Awwaaluuf – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHumnaanis Tahe Olola Dharaatiin Dhugaa ABO fi Kan Qabsoo Bilisummaa Oromoo Awwaaluuf
Humnaanis Tahe Olola Dharaatiin Dhugaa ABO fi Kan Qabsoo Bilisummaa Oromoo Awwaaluuf
Humnaanis Tahe Olola Dharaatiin Dhugaa ABO fi Kan Qabsoo Bilisummaa Oromoo Awwaaluuf Tattaafachuun Rakkina Jiru Daran Hammeessa Malee Furmaata Hin Fidu
(Ibsa ABO – Adoolessa 08, 2018)
Hanga yoonaatti Dhaabni hanga Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa farra dimokiraasii fi farra Bilisummaa ummatootaa tahe (TPLF/EPRDF) irratti qabsaawee fi wareegama itti baase hin jiru. aala siyaasaa har’aan tana Impaayera Itoophiyaa keessatti mul’atu kana uumuuf qabsoo hadhaawaatu geggeeffame. Wareegama ulfaataatu itti baafames. Kana keessatti miseensotaa fi deggertootni ABO waliigalatti, addatti ammoo Waraanni Bilisummaa Oromoo fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo absoon geggeessanii fi wareegamni baasan dorgomaa hin qabu. Walumaagalatti Qabsoo Bilisummaa romoo kan Addi Bilisummaa Oromoo ummata Oromoo wajjin tahuudhaan walitti fufiinsaan geggeessaa uranii fi jirantu haala har’aan tana Itoophiyaa keessatti abdii jijjiiramaa uumee jiru kana maddisiisuu keessatti qooda hundaa olii gumaache. Waan taheef, ABOn jijjiirama mul’achuu eegale kanaaf akka Abbaatti malee akka deggeraa ykn. mormituu haalichaatti kan ibsamu miti. Kun dhugaa eenyu iyyuu haaluu hin dandeenye kan firaa fi alagaa birattis beekamu dha.
Haa tahu malee, har’as bu’aa qabsoo fi wareegama ummata keenyaa kana akeeka siyaasaa biroof oolfachuuf humnoota adda addaatiin duulli cimaan geggeeffamu itti fufee jira. Dabni akkasii qabsoo bilisummaa ummata keenyaa irratti amma duras irra deddeebi’ee dalagamee jira. Haalli kun har’as akka nutti deebi’uuf hin hayyamnu, hin dagamnus. Miseensotaa fi deggertootni keenya, waraanni keenya (WBOn), akkasumas Qeerroon Bilisummaa Oromoo, bu’aa qabsoo hadhaawaa fi areegamaan hanga ammaatti argame kana hanna siyaasaa kamuu irraa ittifachuuf wareegama nu irraa barbaadamu hunda baasuuf qophii dha. Qabsoon har’aan tana guutuu Oromiyaa keessatti itti fufnee geggeessaa jirru haqa kana irratti kan hundaawe dha. Kanas kan goonuuf wareegama ummatni keenya hanga har’aatti baase firii itti goonee gumaa wareegamtoota keenyaa Bilisummaa ummata keenyaatiin baasuufi.
Qabsoo Bilisummaa ummata keenyaa kan wareegamni qaaliin itti baafamee sadarkaa har’a jiru dhaqqabe kana haasaadhaan/negotiation xumura itti gochuuf wal-tajjii fi haalli amansiisaan uumamuu dandeenyaan ABOn sanaaf qophii tahuu irra deddeebinee ibsaa turre. As irratti yaamicha dhimma kana ilaalchisee baatiilee 3 dura (Ebla 04, 2018) mootummaa Itoophiyaatiif dhiheessine ammas irra deebinee yaadachiisuu feena. http://oromoliberationfront.org/aforomo/2018/04/05/
Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin yaamicha keenya maddiitti dhiisuu fi haasaa/negotiation gara furmaata waaraatti geessu irraa dheessuudhaan duula waraanaa fi olola dharaa fi maqa-balleessii daangaa fi safuu hin qabne ABO irratti geggeessuu itti fufee jira. Waa’ee duula waraanaa yeroo ammaa bifa haaraadhaan Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi ABO irratti banamee kan Pirezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa (Obbo Lammaa Magarsaa) fi Jeneraalota EPRDF lamaan hoogganamuu guyyoota sadii dura ibsa baasneen huachiisuun keenya ni yaadatama. Kanatti dabalees, dargaggoota Oromoo meesha-maleeyyii (civilians) “Waraanaa fi poolisa keenya haleeltan” jechuudhaan dharaan yakkanii hidhaatti guuruudhaan sagalee ummata mirga isaa falmatuu qawweedhaan ukkamusuuf duulli mootummaan Itoophiyaa fi Dhaabni OPDO geggeessan bal’inaan itti fufee jira.
Duula waraanaa kanatti dabalee yeroo ammaa karaa miidiyaalee isaanii kan biyya keessaa fi alaa namoota safuu hin qabnee fi farrummaan isaan qabsoo ummata keenyaaf qaban daangaa dabartetti dhimma bahuudhaan ololli ABO irratti oofan babal’achaa jira. Har’a namootni TPLF waliin maaddii/gabatee tokko irraa soorachaa turanii fi jiran oggaa isaan qaanii fi safuun alatti ABO fi TPLF hiriira tokko irra kaa’uudhaan olola oofan argaaa fi dhagahaa jirra. ABO fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo maqaa xureessuuf jecha tahe jedhanii gocha fokkataa kana kan raaw’achaa fi raaw’achiisaa jiran aangawoota mootummaa EPRDF fi OPDO warruma kaleessas tahe har’a TPLF waliin Dhaaba/Paartii tokko keessa jiranii fi TPLF waliin waggoota 27 oliif Oromoo fixaa fi ficcisiisaa jiran tahuun ammoo ajaa’iba biroo ti.
Addi Bilisummaa Oromoo TPLF kan waggoota 27 ol eenyu iyyuu caalaa irratti qabsaawuudhaan dhiiga wal dhangalaasaa jiru wajjin yeroo ammaatti hariiroo bifa kamuu uummachuu danda’a jedhanii yaaduu fi akkasitti irratti ololuun haasaa nama qalbii dabarsee (sammuun tuqamtee) yookaan kan Safuu hin beekne yoo tahe malee nama sammuun fayyaa qabdu irraa kan eegamu miti.
Addi Bilisummaa Oromoo bilisummaa fi mirga abbaa-biyyummaa Saba Oromoo argamsiisuu Kaayyoo isaa godhatee kan qabsaawu Dhaaba kabajamaa naamusa, aadaa fi safuu Oromootiin ijaaramee sossohu dha. Olola dharaatiin ABO maqaa xureessanii ummata Oromoo biratti akka jibbamu taasisuuf duulli OPDOn meeshaa ololaa TPLF tahuudhaan waggoota 27 ol geggeessite wanni fashaleefis kanumaafi. Har’as olola dharaatiin, duula waraanaatiin, shiraa fi hanna siyaasaatiin ABOn akka ummata biratti jibbamu goona, yookaan ammoo kophxeessuu fi doorsisuudhaan harka micciirree gara feenutti fiduu dandeenya jedhanii kanneen abjootaniif dhaamsi qabnu ifaa fi gabaabaa dha. Kaayyoo haqaa kan Bilisummaa fi mirga abbaa-biyyummaa ummata keenyaa galmaan gahuuf qabsoo geggeessaa jirru keessatti, ofii keenyaa fi ummata keenya irrattis abdii fi amantii guutuu qabna. Duula waraanaas tahe olola kamiinuu warra jeeqamnu miti. Humnoota shiraa nu irratti waliif tumsuudhaan harka nu micciiranii waan wareegama ummata keenyaa gatii malee hambisuu danda’u keessa nu galchuuf dhama’an kamiifuu kan hin jilbeenfanne tahuu keenyas gadi jabeessinee ibsuu feena.
Duula waraanaa fi olola dharaa dabaan ABO fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti geggeeffamuu fi falmaa haqaa nuti Dhaaba keenyaa fi Kaayyoo qabsoo ummata keenyaaf, akkasumas, bu’aa wareegama ummatichaa hanna siyaasaa irraa ittisuuf geggeessinu gidduutti gaaga’ama gahu hundumaaf kan itti gaafatamus tahe itti gaabbuuf jiru warra duula shiraa kana ABO fi Qabsoo Bilisummaa Ormoo irratti geggeessaa jiran tahuus hin shakkinu.
Maayyii irratti Manguddootni biyyaa, Abbootiin amantii, Abbootiin Gadaa, Dhaabbattootni/institutions hawaasa keenya biratti fudhatamaa fi dhageeytii qaban hundi, duulli shiraa fi ololli dharaa kan maqa-balleessii ABO fi Kaayyoo qabsoo bilisummaa ummata keenyaa irratti har’aan tana geggeeffamaa jiru kun (keessattuu namoota, murnootaa fi miidiyaalee Oromoof hojjenna jedhaniin kan geggeeffamu) hegeree Saba keenyaa irratti miidhaa guddaa fiduu kan danda’u tahuu beekanii kana hanqisuudhaaf gaafatama ofii akka bahatan ABOn cimsee hubachiisa. Badii akka Sabaatti nutti as deemu osoo arganii callisuun haa dhaabbatu jenna.
Injfannoo Ummata Oromoof !
Adda Bilisummaa Ormoo
Adoolessa 08, 2018
ONN: Adoolessa 8,2018-Dambidoolloo
Waraanii Goleesituun wayyaanee olmaa guyyaa har’a uummata magaala Dambii dolloo nagaa dhorka oluun ganama sirnaa alaaba qeerroo dhorkuun fi nama nagaa qabde hiitee Qawee fi shuguxii Adda fi afaan nama keessa galchiitee sii ajjeefna jechuun dorsiisaa oluun beekamadha sa’a 9:00 booda immoo namoota karaa darba
dhorkuuf Sakata’uun namoota hedduu Sadaafii qaween rukuuta turtee namoota hedduun kan miidhamanii hospital galanii
jiraniidha. Sa’a 1:00 booda waraani wayyaanee dhukaasan kan magaala keessa nama tamsaasaafi reebaa turtedha. Namoota karaa irraa deemaniin ati Abbaa Torbee tti jechuu fi Ati Abbaa Torbee beekta himii jeechuun namoota hedduu miidha irraan geessetti. Haa ta’u malee Humni Addaa Garee Soonsaa /Abbaa Torbee hama waraanii wayyaanee
uummata nagaa dhorka turte caaliisse obsaan amma dhiisuu kan jedhuun ilaala ture Ha ta’u malee waraanii wayyaanee
uummata miidhu waan itti fuufteef namoota hedduu waan miidha gurguddaa irraan geessef. Humni Addaa Garee Soonsaa Abbaa Torbee kan Mirga uummata kabachiisuu sa’a 2:00 irratti Bakka Mooraa isheen galtuutti waraana
wayyaanee Haleelee miidha Guddaa irraan ga’e Jiraachuu isaa of barsiisee jira. Uummatichaafiis Akka dhabate Jiru of mirkineesse jira. Namootni waraanii wayyaanee miidha irran geesiistee heduun
isanii hospital Dambii dollootti yaalama jiru. Mucaan armaan gadiitti suuran isaa mul’atu kun kan waraanii wayyaanee miidha irran geesedha.
Qeerroo Dambii Dolloo irraa.
#Ethiopia: Members of the exiled opposi’n party, Tigray Alliance for National Democracy (TAND) returned to Ethiopia. #TAND is led by Dr. Aregawi Berhe, former veteran #TPLF member & one of its founders. TAND said it now wants to engage in peaceful struggle https://t.co/71zRCTcxel pic.twitter.com/hlwyl7GAmM
— Addis Standard (@addisstandard) July 7, 2018
Chief Administrator of #Oromia regional state, Lemma Megersa received Honorary Doctorate Degree in Peace and Security from #JimmaUniversity #Ethiopia pic.twitter.com/NSwnQQH8rY
— FANA BROADCASTING C (@fanatelevision) July 7, 2018
ETHIOPIA TOUTS GOOD CONDITIONS IN FACTORIES FOR BRANDS LIKE H&M AND CALVIN KLEIN, BUT WORKERS SCRAPE BY ON $1 A DAY